Warbixin: Waa imisa dhaqaalaha Al-Shabaab uga soo xarooda gudaha Soomaaliya? | Somsoon
Home WARAR Warbixin: Waa imisa dhaqaalaha Al-Shabaab uga soo xarooda gudaha Soomaaliya?
Warbixin: Waa imisa dhaqaalaha Al-Shabaab uga soo xarooda gudaha Soomaaliya?
Warbixin dheer oo BBC,du qortay ayaa lagu sheegay in ururka Al-Shabab dhaqaale badan oo canshuur ah uu ka qaado gudaha dalka taasoo williba ka badan tan dawlada ay qaado.
Warbixintaan oo laga soo xigtay machad cilmi baaris sameeya oo la yiraahdo Hiraal ayaa waxaa lagu sheegay in Al-Shabab ay ganacsatada ka qaadaan lacag dhan 15 million oo dollar bil walba taasoo ka badan lacagta dawlada kasoo gasha canshuurta ay ganacsatada ka qaado.
Ka sokow ganacsatada Al-Shabab waxay lacag baad ah la qaadaan shaqaalaha rayidka ah ee dawlada iyo xataa saraakiisha ciidamada sida warbixintaan lagu xusay.
Lacagta ay Al-Shabab ka qaadaan dadka Soomaaliyeed ee 15,ka million gaaraysa kala bar waxaa ay kasoo gashaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ah.
Warbixintaan maanta la daabacay waxaa lagu sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay yihiin dhibanayaal oo dawlada iyo Al-Shababba ay lacago canshuur ah ka qaadaan ayna ku qasbanyihiin inay bixiyaan.
“Ganacsatadu waxay lacagta u baxshaaan oo ay Al-Shabab u siiyaan waa cabsi ay ka qabaan ee maha rabitaankooda iyo qanaaco” ayaa lagu yiri warbixintaan laga soo xigtay machadka baarista sameeyay
Waraysiyo laga qaaday mas’uuliyiin dawlada ku jira, ganacsato iyo xataa hogaamiyaal ka tirsan ururka Al-Shabab oo magacyadooda la qariyay ayaa lagu ogaaday in Al-Shabab ay lacago bille iyo mid sanadle ah ka qaadaan dhamaan shirkadaha waa weyn ee dalka ka jira taasoo ay u kala qeybiyaan canshuur iyo sako iyo xataa mararka qaar shirkadaha laga qaado lacag dhan 2.5% lacagaha faa’idada ah ee ay helaan shirkaduhu.
Magaalada Muqdisho ganacsatada ka shaqaysta meelaha u dhaw xarumaha dawlada sida agagaarka madaxtooyadda ayaa warbixintaan lagu sheegay in laga qaado lacago canshuur ah oo Al-Shabab qaataan.
Dekeda weyn ee magaalada Muqdisho oo ah isha dhaqaalaha ugu badan uu kasoo galo dawlada ayay warbixintaan sheegaysaa in Al-Shababna ay il dhaqaale u tahay oo canshuuraan ganacsatada wax kala soo dega.
Mas’uuliyiin magacyadooda la qariyay oo dekeda ka shaqeeya ayay warbixintu sheegaysaa inay Al-Shabab u gudbiyaan waraaqaha maafeestada loo yaqaan ee maraakiibtu wadato.
Machadka Hiraal ee BBC,du warbixintaan kasoo xigatay waxaa uu sheegay in shaqaalaha dawlada qaarkood ay xataa Al-Shabab siiyaan qeyb ka mid ah mushaarkooda si ay uga nabad galaan.
Shaqaalaha dawlada iyo dadka kale ee ka shaqeeya meelaha dawladu ka taliso waxay sheegeen in taleefoono lagala soo xiriiro sidaasna ay lacagaha ku bixiyaan.
Dhulka ururku ka taliyo dhib badan kalama kulmaan oo toos ayay ganacsatada ugu tagaan ugana qaataan inta ay doonaan ee lacag ah.
Beeralayda iyo xoolo dhaqatada ku sugan meelaha ay ka taliyaan ayaa ah kuwa ugu badan ee ay lacagaha ka qaataan.
Warbixintaan oo aad u dheer waxaa lagu xusay waraysi laga qaaday sargaal tirsan ciidamada Soomaaliya oo lacag badan laga qaaday si ay u suurto gasho sii wadista dhismo guri uu dhisanayay.
Sargaalkaan waxaa uu sheegay in markii uu diiday inuu bixiyo lacag la weydiistay in shaqaalihii dhismaha ka waday gurigiisa loo hanjabay lana joojiyay gaadiidkii qalabka dhismaha geyn lahaa taasoo ugu dambeyn keentay inuu baxsho lacag gaaraysaa 3,600$.
“Waan ku qasbanaa in lacagtaas baxsho anigoo dagaal kula jira maleeshiyadooda waayo wadada kale ee ii furan waxay aheyd inaan dhismaha joojiyo” ayuu sargaalkaan ciidanka dawlada ka tirsan ee Al-Shabab lacagta siiyay oo warbixintaan magaciisa iyo darajiisaba lagu sheegin.
Wuxuu sidoo kale yiri “Anigoo ka xun ayaan baxshay lacagtaas”.
Sidoo kale waxay indho gooni ah ku eegeen Al-Shabab dhismooyinka ay qaraxyada ku dumiyaan marka la damco in dib loo dhisho oo ay mar kale lacago baad ah ka qaadaan haddii loo diidana ay mar kale dib u weeraraan.
Ganacsade jooga magaalada Kismaayo ayaa sheegay in Al-Shabab ay taleefon kula hadleen qof ay shaqo wadaag yihiin oo doonayay inuu dib u dhiso hotel ay horey u qarxiyeen kadibna ay ku qasbeen inuu baxsho lacag aan gorgortan iyo wada hadal toona laheyn.
Qofkii diida dalabka Al-Shabab ee lacag bixinta ah waxaa uu ku qasbanyahay inuu labo mid uun sameeyo inuu ganacsigiisa joojiyo, iyo inuu dalka ka baxo ayaa warbixintaan lagu yiri.
Gaadiidka xamuulka qaada ee gobolada dalka iskaga safra wadayaashoodu waxay sheegeen in lacag badan Al-Shabab ka qaataan laakiin ay kaga duwan yihiin dawlada inay hal booni ku dhex maraan dhulkooda halka dawlada meel walba lacag lagu weydiiyo.
Magaalooyinka Boosaaso, Jawhar, Kismaayo iyo Baydhabo ayaa lagu xusay warbixintaan inay ka mid yihiin magaalooyinka Al-Shabab ay ka helaan dhaqaalaha ugu badan.
Dhawaan golaha amaanka ee Q,M waxaa loo gudbiyay warbixin ay diyaariyeen guddiga dabogalka cunaqabataynta saaran Soomaaliya oo ay ku sheegeen in Al-Shabab ay lacag badan ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed kuwaasoo ay ku fuliyaan weerarada ay dalka ka geystaan.
Article horeGuddoomiye waaxeed maanta lagu dilay degmada Kaxda
Article socoda QM oo si kulul uga hadashay shaqaale caafimaad oo lagu dilay Muqdisho